इटालीमा कोरोनाको भयाभह माहामारी २४ घण्टामै ७९३ काे मृ’त्यु, ! ज्या’न गुमाउनेको संख्या १३ हजार ना’घ्यो – Life Nepali
इटालीमा कोरोनाको भयाभह माहामारी २४ घण्टामै ७९३ काे मृ’त्यु, ! ज्या’न गुमाउनेको संख्या १३ हजार ना’घ्यो
एजेन्सी, ९ चैत्र । विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ को संक्रमणबाट ज्या’न गुमाउनेको संख्या १३ हजार नाघेको छ । कोरोना स’म्बन्धित त’थ्याङ्क नि’काल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार यो समाचार तयार पारिसक्दासम्म कोरोना भा’इरसबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या १३ हजार ३ पुगेको छ । अहिलेसम्म विश्वभर ३ लाख ४ हजार ९९९ जना को’रोनाबाट सं’क्रमित भएका छन् । स’ङ्क्रमण देखिएकामध्ये ९४ हजार ७९३ उप’चारपछि घर फ’र्किएका छन् । अहिले १ लाख ९७ हजार २०३ जना को’रोना संक्रमित छन् । ती’मध्ये ९ हजार ३८२ जना भने ग’म्भीर अव’स्थामा छन् ।
इटालीमा २४ घण्टामै ७९३ काे मृ’त्यु
काेराेना भा’इरसबाट इटालीमा सबैभन्दा धेरैकाे मृ’त्यु भएकाे छ । काे’राेनाकाे उद्ग’म स्थल चीन भएतापनि चीनमा भन्दा इटालीमा १ हजार ५७० जना ब’ढीले काे’राेनाकाे संक्र’मणबाट ज्या’न गुमा’एका छन् । व’र्ल्डो मि’टरर्स डट इन्फोका अनुसार अ’हिले इटा’लीमा को’रोना भा’इरसको का’रण ज्या’न गुमा’उनेको सं’ख्या ४ हजार ८२५ पुगेको छ भने चीनमा ३ हजार २५५ रहेको छ । अहिले काे’राेनाकाे सं’क्रमण हुनेमा पनि इटा’लीमै बढी छ । चीनमा अहिले ६ हजार १३ जनामा मात्रै काे’राेनाकाे सं’क्रमण छ भने इटालीमा ४२ हजार ६४१ जना काे’राेनाबाट सं’क्रमित छन् ।
पछिल्लो २४ घ’ण्टामै इटालीमा ७९३ जनाको मृ’त्यु भएको छ भने ६ हजार ५५७ जना नयाँ सं’क्रमित भे’टिएका छन् । केही दिनयता इ’टालीमा प्रत्येक दिन कोरो’ना भाइ’रसबाट म’र्नेको सं’ख्या तीव्र गतिमा बढीरहेको छ । इटालीमा गत बुधबार ४७५ को मृ’त्यु भएको थियो भने ४ हजार २७० जना नयाँ संक्र’मित भेटि’एका थिए । बिहीबार ४२७ जनाको मृ’त्यु र ५ हजार ३२२ जना नयाँ सं’क्रमित भेटिएका थिए । शुक्रबार ६२७ जनाको ज्या’न गएको थियो भने ५ हजार ९८६ जना नयाँ सं’क्रमित भेटिएका थिए ।
चीनमा भने मृ’त्युदर निकै कम भएर गएको छ । चीनमा बुध’बार चीनमा ८, बिहीबार ३ र शुक्रबार ७ ज’नाकाे ज्या’न गएकाे थियाे । हाल’सम्म इटा’लीमा ४७ हजा’रभन्दा बढीलाई को’रोनाको संक्र’मण भएको छ । तीम’ध्ये ५ हजार १२९ जना नि’को भएका छन् । अहिले इ’टालीमा २ हजार ६५५ जना ग’म्भीर अव’स्था ग’म्भीर रहेकाे छ । कोर’नोको उद्गम स्थल चीनमा भने हालसम्म ८१ हजार ८ संक्र’मित भएपनि अहिले ७१ हजार ७४० जना भने पूर्ण रूपमा नि’काे भइसकेका छन् ।
को’रोना भा’इरसको बढी मृ’त्यु र सं’क्रमण भएको देशको ते’स्रो न’म्बरमा इ’रान र चौथो न’म्बरमा स्पेन पर्छ । अहिलेसम्म इरा’नमा १ हजार ५६५ मृ’त्यु भएको छ’ भने २० हजार ६ सयभन्दा ब’ढी संक्र’मित भएका छन् । त्यस्तै स्पेन’मा अहि’लेसम्म १ हजार ३७८ को मृ’त्यु भएको भने २५ हजार ४ सयभन्दा बढी सं’क्रमित भएका छन् । ची’नको वुहा’नबाट फै’लिएको को’रोना भाइ’रस अहिले वि’श्वका १८५ भन्दा बढी दे’शमा फै’लिसकेको छ ।
Previous कोरोनाको महामारीपछि दिल्लीमा वृद्धभत्ता दोब्बर र गरिबलाई निःशुल्क खाना
Next विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाललाई सुझाव कोरोनाबाट बच्न ‘भारतसँगको नाका छिटो बन्द गर’
‘छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि नेपालमा बुवाले गरे ए’जेन्ट’को ह ’त्या”
भारतमा भारी बोकेर कमाएको १० हजारले लाखौँ कमाउँदै कैलालीका धामी
2 months ago post anu